यसरी सम्बन्ध राख्दा बच्चा बस्छ कि बस्दैन् ? [हरेक दम्पतीले जान्नैपर्ने कुरा] – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > यसरी सम्बन्ध राख्दा बच्चा बस्छ कि बस्दैन् ? [हरेक दम्पतीले जान्नैपर्ने कुरा]
Praja September 22, 2020 Uncategorized	0
काठमाडौं । मानिसहरुको जीवनमा जब सन्तुष्टि मिल्छ त्यहाँ आन्नद मिल्छ । यस दौडमा मानिसहरु हर सम्भव प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । यस्तै मध्यको एक शाररीक सुख पनि रहेको छ । यससँग जोडिएका धेरै कुराहरु नजानेर दम्पतीबीच सम्बन्ध खराब भएको हामीले देखेका छौ । यस्तै केही जिज्ञासाहरुको बारेमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ ।हिलो जिज्ञासा यसप्रकार रहेको छः
सम्पर्क गर्दा शुक्र किट पत्नीको यो–नी बाहिर स्ख लन गरिएको थियो । के अब उनी ग र्भवती हुनेछिन् ? हामी दुबै चिन्तामा छौं किनकि हामी अहिले मातापिता बन्न तयार छैनौं ।
यसै विषयमा अर्को प्रश्नः
म ३१ बर्षको भएँ । मैले मेरी पत्नीको यो–नीको बाहिर शुक्र किट स्ख लन गरें । के उनी ग र्भवती हुनेछिन् ? हामी दुबै चिन्तामा छौं किनकि हामी अझै अभिभावक बन्न तयार छैनौं । रजोनिवृत्ति (महिलाहरूमा रजस्वला बन्द भएको वा रोकिएको अवस्था) मा मैले शाररीक सम्बन्ध राख्दा कस्तो होला ?
माथिका दुई व्यक्तिहरुको जिज्ञासाको उत्तरमा डा. महिन्द्र वत्स महिला ग र्भवती हुन सक्छिन् भन्छन् । उनका अनुसार यी ग र्भावस्थाबाट जोगिने सब भन्दा प्रभाव
एकै परिवारका चारजना झु’न्डिएर आ’त्मह’त्या बारे खुल्यो यस्तो रहस्य!
बिहे गरेर ल्याई घर भित्रिन ठिक्क परेकि बेहुलीले बच्चा जन्माएपछि…
यसरी बाटो छेकेर कुटपिटको प्रयास गरे सरकारी टोलीलाई व्यापारीले
दुःखद खबरः बिहान बैतडीमा बस दुर्घटना